Yangu Blogging Makadhi Asvika! | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 18, 2007 Chishanu, January 6, 2017 Douglas Karr
Kana ndangopedza kutaura kumisangano, ini ndinowanzo bvunzwa kadhi rebhizinesi nevazhinji vashoma vevanhu. Kadhi rebhizinesi? Kune blogger? Nemisangano mitatu ichiuya mumwedzi mishoma inotevera, ndakafunga kutora pombi ndonyatso tora makadhi ebhizinesi akagadzirwa! Handina chokwadi chekuti bhizimusi rakawanda sei randingave ndakarasikirwa mushure mekunge mumwe munhu abuda kunze uye asina kurangarira kuti ndaive ani.
Makadhi asvika nhasi uye ndinofunga anotaridzika kunge akakura:
Makadhi akagadzirwa ne VistaPrint, ino inguva yechishanu kana yechitanhatu yandakaita bhizinesi navo. Ivo vanopa emahara emabhizinesi emabhizinesi emahara nemamwe akajairika magadzirirwo - kana iwe unogona kuenda kunze kwese. Ini ndakasarudza kuzvigadzira zvangu pamusoro pekunze mufananidzo wavaive nawo mumatanda. Ndine kumberi kwakapenya uye kumashure kwakasviba uye kuchena. Imwe fomati matipi… uchishandisa yavo online edita, iwe unogona kuisa imwe dura pamusoro peimwe. Pamusoro peblog blog yangu uye URL, Ini ndinoshandisa chena pamusoro peye nhema font kuti igomira nehuremu hwebhuruu.
Nekutakura, zvakandimhanyisa madhora makumi mashanu emakadhi mazana mashanu. Handifungi kuti zvakaipa zvakanyanya zvachose! Vanozozvibhadharira pachavo nemunhu wekutanga anondirangarira. 🙂
Ini ndakamboita mamwe makadhi akagadzirirwa Baba vangu uye vakagura izwi paari. Pasina nguva ndakaonana VistaPrint, ivo vakagadziriswa nyowani uye vakaiswa husiku kuna Baba vangu. Ndiri kunakidzwa nebasa ravo.
Iva nechokwadi chekundibata pa Kushambadzira Profs B2B Musangano kuuya kumusoro kuChicago! Ini ndichave ndiri padanho reBlogging. Mira ipapo uye ndichave nechokwadi chekukupa kadhi rangu.
Tags: blogging makadhimabhizinesi makadhimakadhidouglas karrKushambadzira Tech BlogMarketing technology blogvistaprint
Sep 18, 2007 na11:45 PM
Jul 31, 2008 na2:25 PM